I-Nirvana idla ngokudibana nezulu, kodwa ihluke
Igama le-nirvana lixhaphake kakhulu kwiintetho zesiNgesi ukuba intsingiselo yayo yenyani ilahleka. Ilizwi liye lamkelwa ukuba lithetha "ukuthabatha" okanye "ukuthula." I-Nirvana yile negama elidumileyo lase-American grunge, kunye neemveliso ezininzi zabathengi, ukusuka kumanzi amabhodlela ukuya kwi-perfume. Kodwa yintoni na, ngokwenene? Kwaye kwenzeka njani kumBuddha?
Incazelo yokomoya, i- nirvana (okanye i- nibbana e-Pali) ligama laSanskrit lasendulo elithetha into efana "nokucima," kunye nokuqhelaniswa kokucima itangatye.
Le ntsi ngiselo enkulu yenze ukuba abaninzi basentshonalanga bacinge ukuba injongo yobuBuddha kukuziqhawula. Kodwa akukho konke uBuddha, okanye i-nirvana, malunga nayo. Inkululeko iquka ukucima imeko ye- samsara , ukubandezeleka kwe- dukkha,. I-Samsara idla ngokuchazwa njengomjikelezo wokuzalwa, ukufa nokuzalwa kwakhona, nangona eBuddhism oku akufani nokuzalwa kwakhona kwemiphefumlo eyingqondi, njengokuba kubuHindu, kodwa kunokuba kubuyiselwe ukuthambekela karmic. I-Nirvana ikwa kuthiwa inkululeko kulo mjikelezo nakwi- dukkha , uxinzelelo / intlungu / ukunganeliseki ngobomi.
Ngentshumayelo yakhe yokuqala emva kokukhanyiselwa kwakhe, uBuddha washumayela iiNyaniso ezine eziNazileyo . Ngokusisiseko, iiNyaniso zichaza isizathu sokuba iingcinezelo zobomi kunye neentlungu. UBuddha usinike nesilungiso kunye nendlela yokukhululwa, okuyiNdlela yesibhozo .
UbuBuddha, ngoko-ke, ayikho inkqubo enkolelo yenkolelo njengoko kuyindlela eyenza sikwazi ukuyeka ukunzima.
I-Nirvana ayikho indawo
Ngoko, xa sikhululiwe, kwenzeka ntoni emva koko? Izikolo ezahlukeneyo zobuBuddha ziqonda i-nirvana ngeendlela ezahlukeneyo, kodwa ngokubanzi ziyavuma ukuba i-nirvana ayikho indawo . Kufana nombuso wobomi. Nangona kunjalo, uBuddha wathi nanto nayiphi na into esinokuyithetha okanye ukucinga ngayo nge-nirvana iya kuba yinto engalunganga, kuba ihluke ngokupheleleyo kubomi bethu obuqhelekileyo.
I-Nirvana ingaphaya kwesithuba, ixesha, nangenkcazo, kwaye ngoko ulwimi luchazwe ngokwaneleyo ukuthetha ngalo. Iyakwazi ukufumana kuphela.
Izibhalo ezininzi kunye nabavakalisi bathetha ngokungena kwi-nirvana, kodwa (ngokuthe ngqo), i-nirvana ayikwazi ukungena ngendlela efanayo nangena ukungena kwigumbi okanye indlela esinokuyicinga ngayo ukuya ezulwini. Umfundi weTheravadin u Thanissaro Bhikkhu uthe,
"... okanye i-samsara okanye i-nirvana yindawo. I-Samsara yinkqubo yokudala indawo, kunye nehlabathi lonke, (oku kuthiwa ukuba yiyo) kunye nokuzulazula (oku kuthiwa ukuzalwa) . "U
Ewe, izizukulwana ezininzi zeBuddhist ziye zacinga ukuba i-nirvana ibe yindawo, kuba ukunciphisa ulwimi akusinikanga enye indlela yokuthetha ngolu hlobo. Kukho inkolelo endala yokuba umntu kufuneka aphinde azalwe njengendoda engena kwi-nirvana. UmBuddha wembali akazange athi nantoni na into, kodwa inkolelo yabantu yayibonakala kwezinye zeMahayana sutras . Le ngcamango yachithwa ngokugqithiseleyo kwiVimalakirti Sutra , nangona kunjalo, apho kucaciswa ukuba bobabini abasetyhini kunye nabantu bangakwazi ukukhanyiselwa kunye namava nirvana.
Nibbana eTheravada Buddhism
I-Budrafiya yeTheravada ichaza iintlobo ezimbini ze-nirvana-okanye iNibbana , njengeAravadins ngokuqhelekileyo zisebenzisa igama le-Pali.
Iyokuqala "yiNibbana kunye nabasalayo." Oku kuqhathaniswa nama-embers ahlala efudumala emva kokuba amalangabi aqaliwe, kwaye ichaza ukuphila okukhanyisiweyo, okanye i- arahant . I-arah isacinga ukuzonwabisa kunye nentlungu, kodwa akayikho kubo.
Uhlobo lwesibini luyi- parinibbana , eyokugqibela okanye epheleleyo yi-nibbana "engena" ekufeni. Ngoku izibilini zipholile. UBuddha ufundise ukuba eli lizwe alikhokho - kuba oko kunokuthiwa kukho ukholwa ngexesha kunye nendawo - nokuba engekhona. Oku kukhangeleka okubonakalayo kukubonakalisa ubunzima obuza xa ulwimi oluqhelekileyo luzama ukuchaza imeko engabonakaliyo.
Nirvana e Mahayana Buddhism
Esinye seziganeko ezahlukileyo ze- Mahayana Buddhism yisithembiso sikaBodhisattva . Ama-Buddha aMahayana anikezelwa ekukhanyeni okugqithiseleyo kuzo zonke izidalwa, kwaye ngoko ke ukhetha ukuhlala ehlabathini ekuncedeni abanye kunokuba uqhubele phambili ekukhanyeni ngabanye.
Okwangenani ezinye izikolo zaseMahayana , kuba yonke into ephakathi-ikhona, "umntu" we-nirvana akaqwalaselwa. Ezi zikolo zeBuddha zininzi malunga nokuhlala kweli hlabathi, kungekhona ukushiya.
Ezinye izikolo zaseBahayana Buddhism nazo ziquka imfundiso e-samsara kunye ne-nirvana ayiyihluke ngokwenene. Umntu oye waqonda okanye waqonda ukungabikho kwamangqina uya kuqonda ukuba i-nirvana kunye ne-samsara ayiyikuchasana, kodwa kunoko-ke iyahlukana. Ekubeni iinjongo zethu eziyinqobo nguBuddha Nature, zombini i-nirvana kunye ne-samsara zibonakaliso zendalo zengqondo zethu ezicacileyo ezingenanto, kwaye i-nirvana ibonakala njengento ehlanjululwayo, eyinyaniso ye-samsara. Ukufumana okungakumbi kule nqaku, jonga kwakhona " Inhliziyo yeSutra " kunye ne " Inyaniso ezimbini ."
Iziphene zesiGwebo esiqhelekileyo ngesiNgesi
Izikolo eziPhambili ze-Architecture e-US
Intshayelelo kunye neMbali yeSka Music
Ukuguqulwa kwezinto ezimbini kwibhola
Izixhobo zeToltec, izixhobo kunye neMfazwe